सरकारले ल्याएकाे दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केछ ? एमालेमा यसकारण चल्यो रुवाबासी — Sanchar Kendra
सरकारले ल्याएकाे दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा केछ ? एमालेमा यसकारण चल्यो रुवाबासी
काठमाडाैं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
माधव नेपाल पक्षको बैठक सुरु
नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरू भएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा सुरू भएको बैठकमा नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको उपस्थिति छ।